သနေ္ဓတည်စဉ်သွေးဆင်းခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကျားသုတ်ပိုးနှင့် မမျိုးဥဟာ သားအိမ်ပြွန်တစ်နေရာတွင် ပေါင်းစပ်ကြ၍ ဖြစ်လာသောသနေ္ဓက သားအိမ်အတွင်းဆုံးအလွှာတွင် လာရောက်တွယ်ကပ်သည့်အချိန်၌ သွေးအနည်းငယ်ဆင်းခြင်းတတ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စတင်သနေ္ဓတည်၍6ရက်မှ 12 ရက်အတွင်း အဖြစ်များသောကြောင့် ပုံမှန်ရာသီလာသည်ဟု ထင်မှတ်မှားတတ်ကြသည်။
ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ကိုယ်၀န်ရှိခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုသမှုခံယူရန် မလိုအပ်သကဲ့သို့ စိုးရိမ်စရာလည်းမလိုပါ။ သို့သော် သွေးဆင်းများပါက စိုးရိမ်စရာလက္ခဏာဖြစ်၍ ဆရာ၀န်နှင့်အမြန်ဆုံးသွားရောက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
ကျားသုတ်ပိုးသည် မမျိုးဥနှင့်ပေါင်းစပ်၍ သနေ္ဓသားလောင်းဖြစ်ပြီးနောက် သားအိမ်သို့ရောက်ရှိကာ အတွင်းဆုံးအလွှာ၌ လာရောက်တွယ်ကပ်လေ့ရှိသည်။ တခါတရံတွင် သနေ္ဓသားလောင်းကပ်တွယ်ခြင်းကြောင့် သွေးအနည်းငယ်ဆင်းတတ်သည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် သနေ္ဓသားကို ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိနိုင်ပါ။
ပုံမှန်ရာသီလာသည်ထက် ပိုမိုအရောင်ဖျော့၍ ပမာဏလည်းနည်းတတ်ပါသည်။ ဗိုက်အနည်းငယ်နာတတ်သည်။ သွေးဆင်းပြီးနောက် မကြာမီတွင် ကိုယ်၀န်ဆောင်စခံစားရသော လက္ခဏာများကို စတင်ကြုံတွေ့ရတော့သည်။
သွေးဆင်းခြင်းသည် သူအလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားပါမည်။ ပမာဏများသည်ဟုထင်လျှင်တော့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာ၀န်တစ်ဦးဦးနှင့်ပြသ၍ ကုသမှုခံယူသင့်သည်။
ကိုယ်၀န်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သနေ္ဓတည်စဉ် သွေးဆင်းခြင်းအပြင် အခြားအကြောင်းအရင်းများကြောင့်လည်း သွေးဆင်းနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သွေးဆင်းများခြင်းအပြင် ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်းများရှိပါက ဆရာ၀န်ထံချက်ချင်းသွားပါ။
1. ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း - တခါတရံတွင် ကိုယ်၀န်ရှိခါစတွင် ဖြစ်တတ်သော်လည်း ကိုယ်၀န်ရှိစဉ်တလျောက်လုံးတွင်လည်း အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။
2. သားအိမ်ပြင်ပ၌ သနေ္ဓတည်ခြင်း - သနေ္ဓသားလောင်းသည် ပုံမှန်သားအိမ်အတွင်း၌ မတည်ဘဲသားအိမ်အပြင်ဘက်တစ်နေရာရာတွင် သနေ္ဓတည်မိပါက သွေးဆင်းခြင်းအပြင်၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း ေ၀ဒနာများပါ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေဖြစ်သောကြောင့် ချက်ချင်းကုသမှုခံယူသင့်သည်။
3. ကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်း - အမျိ်ုးသမီးအများစုသည် ကိုယ်၀န်ပျက်ကျပြီးနောက် သွေးဆင်းခြင်းနှင့်ဗိုက်အောင့်ခြင်းေ၀ဒနာများကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။